Madax weynaha DDS oo maanta dhiig ku deeqey. - Hargeele - Wararka Somali State
Madax weynaha DDS oo maanta dhiig ku deeqey.
February 24, 2020 185
Madax weynaha DDS mudane Mustafe Muxumed Cumar oo kor meerey xarunta kuliyada maareynta iyo adeega shacabka halkaasi oo hogaaminta dhexe ee xisbiga barwaaqo, uu tababarku uga socd.Intaas ka dib ayaa madax weynuhu waxa uu booqdey xarunta kaydka dhiiga ee Jigjig, halkaasi oo madax weynuhu dhiigiisa ku deeqey. Waxaanu sheegey madax weynuhu in dhiiga oo la kaydiyaa ka mid tahay horu marada waayo waxaa markiiba lagu badbaadin karaa naf u baahan, mida kale waa dhiig la hubiyey nadaafadiisa iyo caafimaadkiisaba sida uu sheegey madax weynuhu.Dhinacooda waxaa iyaguna shubey xubanaha hogaaminta dhexe ee tababarku u socdey.
Madax ka socotey Bank horumarinta Afrika oo booqdey gobolada Qoraxey iyo Jarar.
“Haddii aynaan ku guuleysan Champions League, waxaan noqon doonnaa kuwo fashilan sida shantii sano ee la soo dhaafay” – De Bruyne
Wafdi uu hogaaminaayo madax weyanaha DDS oo mashaariic cusub dhagax dhigey.
Wasiirka xafiiska biyaha oo kulan la qaatay shirkada gacanta ku haysa mashruuca biyaha Godey.
Ra’iisal wasaare Dr. Abiy oo la kulmey madaxweynaha koonfurta Kuuriya.